I-Neodymium Ring Magnet kunye ne-Zn Plating yezicelo zesandisi-lizwi, Izithethi zoomazibuthe
Ukufumana isandi esifanelekileyo kwisithethi, umazibuthe onamandla, umazibuthe we-neodymium, usetyenziswa kakhulu. Isandi semagnet esinegunya elinamandla kunawo nawuphi na umazibuthe osisigxina owaziwayo.
INeodymium Bar Magnet enemingxunya yeCompersunk
I-Neodymium Countersunk Bar Magnet ineempawu ezingaguquguqukiyo eziphezulu, ubuninzi bobushushu obuqhubekayo bokusebenza, kunye nokumelana okuhle. Imingxunya yokubala isetyenziselwa ukubethela izifundo.
Ikhonkco yeMagnethi yokuDibanisa iiNkqubo zokuVala iMagnetic okanye iiNdawo zoMatshini zentsimbi
Iimagnethi zekona zisetyenziswa ngokugqibeleleyo kwizinto ezimbini ezibunjwe nge-"L" ezenziwe ngentsimbi okanye iiprofayili ezimbini zokuvala amandla xa ujika. Amanqatha ongezelelweyo anokukhetha ukonyusa ukubopha phakathi kwe-magnt yekona kunye nokubumba kwentsimbi.
Ibha yentsimbi yentsimbi yokukhupha i-Push / Pull Magnets
Ibha yentsimbi yentsimbi sisixhobo esilinganayo sokukhulula iimagnethi zokutyhala / zokutsala xa ufuna ukuyisusa. Iveliswa ngetyhubhu ephezulu kunye nensimbi yentsimbi ngenkqubo yesitampu kunye ne-welding.